Madaxweynaha dalka oo ka qeyb galaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo ka qeyb galaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay
Star FM September 23, 2018
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa hadda ku sugan magaalada News York ee Maraykanka halkaasi oo uu uga qeyb galaya kal fadhiga 73-aad ee golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee (UNGA 73).
Qeybta dowlada u qaabilsan isgaarsiinta iyo macluumaadka lala wadaago warbaahinta ee NEXUS ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda rasmiga ah ee twitarka ku sheegtay inuu Mr. Kenyatta halkaasi khudbad ka jeedin doono maalinka arbacada ah ee toddobaadkan.
Sido kale waxaa la filaya inuu madaxweynaha tageera u raadiyo shirweynaha ku saabsan dhaqaalaha ee loo yaqaano ‘Blue Economy’ ee ay Kenya marti gelin doonto bishan koow iyo tobnaad ee sannadkan iyo dadaalka nabadeed ee caalamiga ah.
Khudbadaasi kadib waxaa uu kulamo laba geesood ah la yeelanaya hoggaamiyaasha kale ee caalamka.
Waxaa fadhiga golaha guud ee qaramada midoobay ka qeyb galaya in ka badan 150 madaxweyne oo uu ka mid yahay hoggaamiyaha Maraykanka Donald Trump.
Xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa berri oo isniin ah yeelanaya kulan heer sare ah oo ku saabsan nabadgeliyada dunida oo lagu maamuusayo dhalashadii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika, Nelson Mandela.
Arbacada oo ku beegan 26-ka bishan sagalaad golaha UNGA ayaa yeelanaya kulan ku aaddan la dagaalanka cudurka qaaxada maadaama arrinkaasi lagu heshiiyay bishii labaad ee sannadkan.
Khamiista oo ah 27-ka bishan, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dib u milicsanaya horumarka laga gaaray ka hortagga iyo xakameynta cudurada aanan la isku gudbin.
← Raila Odinga oo ammaanay siyaasiyiinta mucaaradka ee dowlada ku tageeray qiimaha canshuurta shidaalka
DHAGEYSO Tageerayaasha guddoomiyaha Migori oo maanta dibadbax sameeyay →